Izindaba - Izinzuzo zamathuluzi womshini we-CNC
Izinzuzo zamathuluzi womshini we-CNC
Ithuluzi lomshini we-CNC yisifinyezo sethuluzi lomshini wolawulo lwedijithali, okuyithuluzi lomshini lokuzenzekelayo elihlome uhlelo lokulawula uhlelo. Uhlelo lokulawula lungalucubungula ngokunengqondo lolu hlelo ngamakhodi wokulawula noma eminye imiyalo engokomfanekiso, bese luyinquma, ukuze ithuluzi lomshini lihambise futhi licubungule izingxenye.
Uma kuqhathaniswa namathuluzi wemishini ejwayelekile, amathuluzi womshini we-CNC anezici ezilandelayo:
● Ukucubungula okuphezulu nokunemba kokucubungula;
● Ukuxhumanisa okuningi kungenziwa, futhi izingxenye ezinokuma okuyinkimbinkimbi zingacutshungulwa;
● Lapho izingxenye zemishini zishintsha, ngokuvamile kudinga kuphela ukushintsha uhlelo lokulawulwa kwezinombolo, olungonga isikhathi sokulungiselela ukukhiqiza;
● Ithuluzi lomshini uqobo linokunemba okuphezulu nokuqina okuphezulu, lingakhetha inani lokucubungula elithandekayo, futhi linomkhiqizo ophezulu (ngokuvamile izikhathi ezi-3 ~ 5 zamathuluzi wemishini ejwayelekile);
● Ithuluzi lomshini linezinga eliphakeme lokuzenzekelayo, elinganciphisa ukuqina kwabasebenzi;
● Izidingo eziphakeme zekhwalithi ye-opharetha nezidingo zobuchwepheshe eziphakeme zabasebenzi bokulungisa.
Ngoba ukucutshungulwa kwensimbi ye-CNC kungumsebenzi wokunemba okuphezulu, futhi izinqubo zayo zokucubungula zigxilwe futhi nenani lezingxenye zokubamba lincane, ngakho-ke izidingo eziphakeme zibekwa phambili ngamathuluzi e-CNC asetshenzisiwe. Lapho ukhetha amathuluzi amathuluzi womshini we-CNC, kufanele ucabangele Lezi zinkinga ezilandelayo:
Grade Uhlobo, ukucaciswa nokunemba kwebanga lamathuluzi e-CNC kufanele likwazi ukuhlangabezana nezidingo zokucubungula i-lathe ye-CNC.
Ngokunemba High. Ukuze kuhlangatshezwane nokunemba okuphezulu kanye nezidingo zokuzenzekelayo zoshintsho lwethuluzi lokucubungula i-CNC lathe, ithuluzi kumele libe nokunemba okuphezulu.
Reli Ukuthembeka okuphezulu. Ukuqinisekisa ukuthi ngeke kube khona ukulimala ngengozi kanye nokukhubazeka okungaba khona kwethuluzi emshinini we-CNC, okuzothinta inqubekela phambili ebushelelezi yemishini, ithuluzi kanye nezesekeli ezihlanganiswe nayo kumele zibe nokuthembeka okuhle nokuzivumelanisa nezimo okuqinile. Ukucutshungulwa Precision metal
D ukuqina okuphezulu. Amathuluzi acutshungulwa yi-CNC lathes, kungaba ku-roughing noma ekuqedeleni, kufanele abe nokuqina okuphezulu kunalawo asetshenziswa kumathuluzi wemishini ejwayelekile, ukuze kuncishiswe inani lezikhathi zokushintsha noma ukugaya amathuluzi nokusetha amathuluzi, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukucubungulwa kwamathuluzi womshini we-CNC . Ukusebenza kahle kanye nekhwalithi yokucubungula.
Breaking Ukusebenza okuhle kwe-chip breaking nokususwa kwe-chip. Ekucubunguleni i-CNC lathe, ukukhishwa kwe-chip nokususwa kwe-chip akuphathwa ngesandla njengamathuluzi omshini ajwayelekile. Ama-chip kulula ukugoqa ithuluzi nocezu lomsebenzi, okuzolimaza ithuluzi bese kuklwebheka ubuso bomshini bento yokusebenza, futhi kubangele nezingozi zokulimala nemishini. , Okuthinta ikhwalithi yokucubungula nokusebenza okuphephile kwethuluzi lomshini, ngakho-ke ithuluzi liyadingeka ukuze kube nokusebenza okuhle kwe-chip breaking nokususwa kwe-chip.